Ihe na esi nri na Canaima | Site na Linux
Talpio | | Noticias
Ndewonu mmadu nile, ekene m @Talpio na nke ugbu a m na-abịa na-ekwu banyere Cayapa Canaima nke ahụ mere n'izu gara aga maka ụbọchị 5 na Universidad Nacional Abierta na steeti Falcón, Venezuela ebe ndị otu obodo dị iche iche nweere onwe ha, ndị mmepe, ụmụ akwụkwọ na ndị Fans nọ n'ọhịa sonyere, mana ka anyị buru ụzọ kwuo maka egwuregwupa.
O so n’omenala ọdịbendị na Venezuela ma jiri ya kọwaa usoro nke ndị otu obodo si arụkọ ọrụ ọnụ na-arụkọ ọrụ, ma ọ bụ iji mejuo otu onye ma ọ bụ mkpa mkpokọta.
ugbua na usoro nke wiki nke Cayapa Canaima:
Ven Na-ezukọ na ebumnuche nke ime ka ndị obodo sonyere na Canaima Project, na-ekwe ka ebumnuche atọrọ n'usoro ikpo okwu, nhazi na mmepe ka akọwapụtara, na-etinye ndị mmepe na ndị na-anụ ọkụ n'obi na arụmọrụ nke ngwa sọftụwia dị mkpa n'ime Canaima
N'ịghọta nke a, a ga-eche na ihe esi nri na Canaima nke ihe omume ya gụnyere ụzọ abụọ nke ọrụ yiri ya na mpaghara nke mbụ na tebụl ihe ọmụma 10 na nke abụọ, yana tebụl teknụzụ 12 dịka CNTI.
Na mgbakwunye Na tebụl teknụzụ ha tụlere amụma iji meziwanye Canaima GNU / Linux ebe ha webatara Agbụrụ dị ka 'ngwa iji rụọ ọrụ na ya Canaima«, A kọọrọ ahụhụ dị iche iche 15 dị egwu, ebe nrụọrụ weebụ Canaima dị ka akụkụ ọhụụ ọhụụ, Canaima Installer, na tebụl teknụzụ ndị ọzọ dịka Canaima Educativo, Canaima Universitario ...
Dị ka m kwuru na mbụ, a ga-enwe usoro ikpo okwu ọhụrụ nke @macagua, ebe ị pụrụ ịhụ na Analọ ọrụ Canaima weghachite. Ebe nrụọrụ weebụ CNTI gosipụtara na ụbọchị enwere ike maka version kwụsiri na ntanetị ọhụrụ nke Canaima ga-abụ ihe dị ka izu abụọ (ọ nwere ike iwe obere oge) mgbe emechara Cayapa.
Naanị ya ga-echere ka sancocho dịrị njikere ebe ọ bụ na ọ banyela na-agba agba ma nwee ike ịnụ ụtọ nkesa ya. Nke a bụ obere akụkụ nke ihe mere na 7th Cayapa Canaima na agbaghara m nkọwa ụfọdụ ebe a ị nwere ike ịchọta ndepụta nke ọrụ.
Egbula ileta Photogallery nke 7th Cayapa Canaima
Anyị ga-aga n'ihu na-agwa! 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ihe na esi nri na Canaima
Nwaanyị na ịkpa ókè agbụrụ.
Ọfọn, olee ihe ọzọ ị ga-atụ anya n'aka onye ọrụ Windows XP
Ndo, ị dị ka onye nzuzu na-agwa onwe gị okwu, mana okwu ị zara m bụ nke ehichapụ dị ka xenophobic na racist
http://i.imgur.com/VeLClb2.png Hehe ñ
Na-akpali mmasị, n'oge na-adịghị m ga-anwale ya iji hụ otú ọ dị.
Zaghachi ka ọ nụ
Cayapa aaaaaaaaajajajajajajaja, lezie asụsụ anya, ọzọ a enjendro. Dịka onye Venezuela, ihere na-eme m banyere ndekọ canaima a.
Anaghị m akwado Canaima, enweghị m nzuzu iji bipụta ụdị nkọwa a ...
M si Venezuela, dị ka gị, m na-akwado ihe ọ bụla metụtara na ngwanrọ n'efu, ọ bụ ihe ihere na ha emebeghị ihe ka mma na oge a na Canaima ...
Ọ bụghị na ọ bụ ihe ọgbara ọhụụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ihe ndị dị na Canaima na-aga ọtụtụ, ọtụtụ ihe karịrị eziokwu nke ịmepụta distro, ọtụtụ nsị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abanye ebe a na ọrụ ahụ ga-ehichapụ n'ụzọ doro anya n'otu akụkụ, ndị mmadụ na-akwado otu. ụdị ụfọdụ mgbe ụfọdụ anaghị ahụ nke ọma.
Ma na-ahapụghị nke oru okwu, Canaima mmehie nke na-akpọsa "oké ọganihu na ohere na larịị nke nkà na ụzụ na Venezuela" mgbe ọ bụ n'ezie ihe ọ bụla karịa a rehash nke Debian na ihe na ihe na-adọrọ mmasị iberibe na ọtụtụ ụmụ amaala aha na-nanị na-egosipụta a ụfọdụ ịhụ mba n'anya
Kama i nweghị ike
N'uche m, ọ bụ enweghị njirimara dị ka ndị dị otú a, onye ọrụ a na-ahụkarị nke na-echekarị ihe ka ọ pụta iji hụ ma ọ masịrị ya ma ọ bụ na ọ masịghị ya, na-adị elu karịa na isiokwu a na-amaghị nke ọma.
I kwesiri ka ihere mee gi banyere mmejọ gi. N'aka nke m, dị ka onye Venezuelan, achọpụtara m ọtụtụ ihe ndị ọzọ ihere na-eme m, mana ọ bụghị ọrụ Canaima.
Ihere? Echeghị m otu ahụ, gịnị kpatara m? Dịka o nwere ike ịbụ, nke a emeela ka SL nwee mmasị na nke ahụ enwere ekele na mba ahụ.
Ma enwere ndị na-ekwu na a na-edozi ahụhụ niile site na itinye ya n'ime obi na-asị "mere n'ime ...".
Zaghachi Jesús Delgado
Dị ka onye Venezuelan, enwere m mwute maka gị na okwu gị ... Salud compatriot.
Site na Mexico ọ bụ nsọpụrụ maka nnukwu obodo (Latin America) ịhụ otu ọrụ ndị a si aga: D, na-emecha edemede m, m ga-achọ ọrụ GNU nke m nwere ike inyere ma kesara ndị m na Chiapas
Dị njikere na ọ bụghị canaima, trisquel linux, nke kacha mma. Nano daalụ, ị na-ekele m.
Echegbula onwe gị nwoke, ọ bụrụhaala na ị naghị egbu ha, agaghị m ahapụ oge mụ na gị ịnọ.
Kedu ihe ihere ị na-eme m ka m nwee mmetụta Frank Davila Amaghị ihe ị nwere oke, Salud compatriot.
Isi nri na nsị bụ ihe kacha mma gọọmentị Venezuelan na-eme ma ọ bụrụ na ha etinye ndị agha na cayapa na ndị nche mba nwere ike ịme ụfọdụ ezigbo ...
Dị ka ajụjụ ... a ga - ahapụ Canaima na ihe ọkụkụ ndị ọzọ? (M na-eji Mint 12).
Ọ dị mma, agbụrụ kwesịrị ikwe ka e mepụta ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ nke Canaima, mana ọ ga-adịkwa mkpa ịhụ ihe ekpomeekpo Canaima bụ na otu ọ ga-esi dị iche na isi distro ...
Banyere Shell, ọ na-eju m anya nke ukwuu n'ihi na nsonaazụ nke nnwale nke CNTI mere ọha na eze gosipụtara na ha anabataghị ma ọ bụ gbanwee nke ọma na Shell, ha chere maka iji Mate ma ọ bụ Cinnamon, mana lee, amaghị m otu m ga-esi gwa gị ọtụtụ ihe, ogologo oge gara aga na anaghị m agwa ndị nke CNTI D:
Echere m na nsụgharị na Mate agaghị adị njọ ma ọlị.
@ Onyekachukwuchichukwu (goidor) dijo
Ekele m unu niile. Cayapa magburu onwe ya, m nọ na nkwado nke Web Platform, nke dị na Plone na Django. Olileanya na ndepụta a n'oge na-adịghị anya. Echere m na anyị ga-akwado ihe anyị na-eme iji mee nke ọma na nke ọma.
Zaghachi @ 4krodrigoxd (goidor)
Lawrence Udo dijo
Dị ka ha na-ekwu na Spain: Kedu ihe bọọlụ jikọrọ iri ọka wit?
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu maka ọrụ GNU / Linux ma hazie nke ọma.
Kedu ihe ọzọ gọọmentị Venezuelan nọ n'azụ? Enweghị distro North Korea (http://www.youtube.com/watch?v=ex4ZPZuFdaA) Onweghi ekpomeekpo nke islam ubuntu na onye ozo nke Kraist?
Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-emegide distro ahụ ejirila ya na oge ma sọpụrụ ọrụ nke ndị ahụ metụtara.
Na ikpe azu, n’uche nkem, mgbe ndi mmadu tinye n’otu uzo ma obu ozo n’ime oru ndi di otua (ma obu GNU / Linux ma obu ndi ozo), ihe oma n’abia mgbe nile, ma dika o bu obodo, anyi nile nwere ike irite uru.
Ekele m ndị niile na-agụ ya.
Anaghị m akwụsị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke canaima, m na-eji ya ma ọ bụ ya
Ihe ozo n’eme m ka arara anya ka ha we rue mgbe ebighebi, ha kwesiri itinye uche n’ime oge mmepe ..
Ekwenyere m na dị ka ndị Venezuelan anyị niile kwesịrị ịkwado ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ị masịghị ya, rụkọta ọrụ iji melite ya maka nke ahụ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ iji tinye ọnụ ma nweta uru ọ bụla.
Enweghị m ihe ọ bụla megide distro, naanị m na-ahụ na ọ naghị enye aka na ihe ọ bụla, belụsọ ịgbanwe aha mmemme xD ..., yana mmemme abụọ ma ọ bụ atọ, mana ọ nweghị ihe ọzọ. Echere m na maka ihe ha na-eme, ọ ga-aka mma ka ya na ndị obodo ọ bụla na-arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ nke debian kde, nye onyinye ma kesaa ya na mba ahụ.
Echere m na Linux na nke ọ bụla ọ na-ekesa bụ ihe kachasị mma anyị nwere ike ịnwe ebe ọ bụla n'ụwa, Linux enweghị ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla dị ka ụfọdụ si eche, ọ bụ ihe atụ nke mmepe mmekọrịta, na ụmụ mmadụ anọwo na-etinye akụkụ. maka naanị eziokwu nke i copomi ihe site na ọdịbendị ndị ọzọ na-emebi mmadụ, n'aka nke ọzọ, onye ọ bụla na-akatọ ma na-atụghị aro ka mma ịgbachi nkịtị, ana m ekele ndị chọrọ n'ezie ka Venezuela nwee ọganihu ma nwee nnwere onwe n'ezie
Ndewo Talpio, ọ na-apụta na m dara na blọọgụ a ụbọchị ole na ole gara aga ma enwere m mmasị na isiokwu ndị e bipụtara, yana onye Venezuelan, mgbe m hụrụ ọkwa a gbasara ụtọ ọhụụ nke Canaima kpaliri m ịza gị, ekele maka akụkọ ahụ, aga m ede blog na Informaticas ozi ọma si ebe a ebe ọ bụ na n'echiche m, anyị nwere ihe ọmụma ole na ole na-aga n'ihu na teknụzụ na gburugburu ebe obibi n'efu, (Ọ bụrụ na ọ bụghị maka mbipụta Xombra m ga-efu n'okwu ahụ hehe), na m ga-eso njikọ ndị ị hapụrụ gwa m otu m ga - esi sonye na mmepe ma ọ bụ ule ma ọ bụ ihe ọ bụla na - abịa nyere ọnọdụ m dị ka rookie.
Ekele, ekele ọzọ maka post.
Ọ bụ kwuru na ndị na-ekwu okwu ebe a na-akatọ Canaima kemgbe ya ikpeazụ mbipute na virtualized mkpuchi na e nyeghị ọrụ nke anwale Canaima 4 beta 2. Nke a distro na-aga inye a mberede ka ọtụtụ ndị na-rue mgbe nkatọ.
Canaima GNU + Linux nwere nkwado m, dị ka nkesa nke obodo mere ebe ị nwere ike ịchọta ndị chọrọ n'ezie inye aka na obodo ngwanrọ n'efu na mmepe mba. Ọ bụ ezie na, dị ka echiche onwe onye, ​​ekwesịrị m ịsị na a chọrọ ịkwanye n'ihe gbasara eserese eserese na mmepe nke ngwa ya na ngwọta ya.
Ndị nke OS elementrị na distros ndị ọzọ arụsi ọrụ ike iji mee ka nkesa mara mma, ọkụ na arụmọrụ, ihe na-erughị ihe ọrụ Canaima dị, na nke a na-enweghị nkwado gọọmentị ọ bụla ma ejiri m obere obodo.
Anaghị m ekwu nke a n'ụzọ dị oke egwu, amaara m na na mba ahụ onyinye ka mma, anyị nwere Turpial onye bụ otu n'ime ndị nchịkwa kachasị mma nke Twitter mgbe ọ na-arụ ọrụ. Naanị m na-eche ebe talent ahụ niile dị mgbe ị na-arụ ọrụ dị ka Cunaguaro ma ọ bụ Guacharo.
Nke ngwaahịa, nkesa na distros